Wasaarada ganacsiga oo sheegtay in ay talaabo la qaadeyso shirkadaha ajaanibta. – Radio Muqdisho
Wasaarada ganacsiga oo sheegtay in ay talaabo la qaadeyso shirkadaha ajaanibta.
Wasiirka Ganacsiga Iyo Warshadaha Soomaaliya Ing C/llaahi Cali Xasan oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in tilaabo ka qaadi doonaan shirkadaha ajaanibta ee ka howgala dalka si sharci daro ah
“Tallaabo ayaa laga qaadidoona shirkadaha ajanabiga ah ee sida sharcidarada ugu howlgala dalka”.
Waxaa uu sheegay wasiirka in ay la xisaabtami doonaan hay’adahaasi.
Lama oga sida uu u dhaqan geli doono go’aankaasi ka soo baxay dhinaca Dowladda.
Soomaaliya oo ka qeyb gashay kulanka Golaha Wasiirrada Cadaaladda Jaamacadda Carabta oo ka dhacay Masar+Sawirro
Duqa Muqdisho oo ku baaqay in Culimada horsed ka noqdaan xaqiijinta bulsho mideysan